05/11/2018 - Page 3 sur 3 -
Efa niatrika fitsaboana teny amin’ny hopitaly tao anatin’ny roa volana. Tsy maintsy hiatrika fandidiana i Fanaiky, ilay mpanakanto fantatra eo amin’ny fitendrena gitara beso noho ny homamiadan’ny voa mahazo azy. « Efa miha-tsara izy nefa …Tohiny
Nangorom-potsy ny kianjaben’i Mahamasina ny asabotsy 3 novambra teo tamin’ny faradoky ny fampielezan-kevitry ny kandidà laharana 25 amin’ny bileta tokana, Marc Ravalomanana. Hafaliana sy firavoravoana ary endrika miramirana no nitsenan’ireo olona marobe an’ity kandidà ho …Tohiny
Nihoby ny fahamaizan’Antananarivo ny TGV ny taona 2009. Nikatso tanteraka ny fampandehanan-draharaha rehetra nanomboka ny 26 Janoary 2009 noho ny tahotra sy horohoro, kila forehitra avokoa izay rehetra nolalovan’ny TGV. Tsy niandry ela ny tso-drano …Tohiny